HFE mpanadio ho an'ny mpitsangatsangana ho an'ny semiconductor China Manufacturer
Description:Manimba ny tontolo manodidina ny tontolo iainana,Hydrofluoroether Environment Friendly,HFE manodidina ny tontolo manodidina
Home > Products > Hydrofluoroether Clean Agent > Fitaovana fanadiovana ho an&#39;ny Semiconductor > HFE mpanadio ho an&#39;ny mpitsangatsangana ho an&#39;ny semiconductor
HFE Hydrofluoroether Solon'ny rindrambaiko ho an'ny tontolo iainana ho an'ny Semiconductor
Hydrofluoroether DETERGENT rehefa ampiharina amin 'madio, hamandoana-maimaim-poana faritra toy ny PCB laminates, malefaka polymide sarimihetsika, varahina, aliminioma, tanimanga, vy, fitaratra na plastika substrates izany, dia ho tontolo iainana-namana vokatra, izay sady colorless sy odorless, na poisonless ary tsy manan-tsahala, ary mitoka-monina. Ny hydrofluoroether cleaning agent dia tsy fahampian-tsakafo avo lenta amin'ny dielectric, ny tebiteby ambany dia ambany, ny hodi-jiro ambany, ny tsy fahampian-tsakafo tsy misy fialana ary ny fahamendrehana tsara. Ny HFE hydrofluoroether dia mety hiparitaka sy hiparitaka amin'ny rindrin'ny fitaovam-panafody sy ny poreau isan-karazany, ary misy vokany tsara amin'ny famonoana, ny fampangatsiahana, ny famafazana sy ny fanadiovana. Ny vahaolana fanadiovana HFE dia manana tsiranoka maromaro kokoa, ary azo ampiharina amin'ny fitaovana fanadiovana isan-karazany.
Ireo toetra mampiavaka ny fanadiovana:
Fanadiovana vahaolana ara-teknika:
Fikarakarana vahaolana amin'ny famolavolana sy fametrahana fitaterana semiconductor:
Ity fitafy ho an'ny orinasa ity dia feno 25kg / barrel, na ho an'ny mpanjifan-tsakafo, mora voatahiry sy nentina.
Manimba ny tontolo manodidina ny tontolo iainana Hydrofluoroether Environment Friendly HFE manodidina ny tontolo manodidina